Maahan In Qof Kasta Oo Kula Dhaqma Uu Yahay Macaamiil | Martech Zone
Isdhexgalka khadka tooska ah iyo booqashooyinka gaarka ah ee boggaaga ayaa daruuri u aheyn macaamiisha ganacsigaaga, ama xitaa macaamiisha mustaqbalka. Shirkaduhu badanaa waxay ku qaldaan inay u maleeyaan in booqasho kasta oo websaydh ah ay tahay qof xiiseynaya wax soo saarkooda, ama in qof kasta oo soo dejiya hal warqad cad uu diyaar u yahay inuu iibsado.
Maaha sidaas. Haba yaraatee.
Soo booqde websaydhku wuxuu yeelan karaa sababo badan oo kala duwan oo ku saabsan ogaanshaha boggaaga iyo waqti la qaadashada waxyaabahaaga, midkoodna kuma xirna inuu noqdo macmiil dhab ah. Tusaale ahaan, booqdayaasha boggaaga waxay noqon karaan:
Tartamayaasha isha ku haya adiga.
Shaqo doon doonaya riwaayad ka wanaagsan.
Ardayda baarayaan warqad xilli kulleejo ah.
Hase yeeshe, ku dhowaad qof kasta oo ku dhaca saddexdaas qaybood ayaa inta badan halis ugu jira inuu taleefan soo diro ama ku xirmo liiska emaylka.
Ku rida qof kasta oo soo booqda baaldi macaamil waa dhaqan khatar ah. Kaliya maaha daadad fara badan oo ku saabsan ilaha si loo baacsado qof kasta iyo qof kasta oo wadaaga lambarkiisa taleefankiisa ama cinwaanka emaylka, laakiin sidoo kale waxay u abuuri kartaa waayo-aragnimo xun dadka aan ujeedo u lahayn inay noqdaan bartilmaameedka alaab suuq geyn ah.
U-beddelashada booqdayaasha macaamiisha, ama xitaa kaliya ogaanshaha booqdayaasha ku habboon inay beddelaan, waxay u baahan tahay faham qoto dheer oo ku saabsan cidda ay yihiin. Halkani waa halka 3D (seddex geesood ah) dhibcaha hogaanka ciyaarta ayaa timaada.
Dhibcaha hogaanka ma ahan wax cusub, laakiin kan sare u kaca Xogta Weyn waxay keentay jiil cusub oo 3D xallinta dhibcaha hogaaminta kuwaas oo si qoto dheer ugu daraya sida suuqleyda iyo xirfadleyda iibku u arkaan macaamiisha iyo rajooyinka. 3D dhibcaha waa isbeddelka dabiiciga ah ee xogta qiimaha leh ee aad ku uruurineysay macaamiishaada muddo sannado ah, oo aad ugu adeegsaneysid sida ugu fiican ee ugu adeegi kara macaamiishan iyo ugu dambeyntiina, kordhinta iibkaada iyo khadkaaga hoose
Hadday ganacsi diiradda saareyso istaraatiijiyadaha suuq geynta B2C ama B2B, dhibcaha hogaaminta 3D waxay ka caawin kartaa iyaga inay cabiraan sida ugu dhow ee rajada ama macaamilku ula jaan qaadayaan astaantooda "fiican", dhammaantood iyagoo raadinaya heerkooda hawlgelinta iyo ka go'naashaha. Tani waxay xaqiijineysaa in diiraddaada ay saaran tahay dadka runtii wax iibsan kara, halkii aad ka bixin laheyd shabaq ballaadhan oo qaali ah si aad ula xiriirto booqde kasta oo hadda uun ku soo dhaca goobtaada.
Marka hore, Aqoonso tirakoobka dadweynaha ama firmagraphics
Waxaad ku dhisi doontaa dhibcahaaga 3D adoo aqoonsanaya macmiilkaaga. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato “Waa kuma qofkani? Iyagu ma ku habboon yihiin shirkaddayda? ” Nooca ganacsiga aad kujirto ayaa go'aamin doona nooca aad u adeegsan doonto 3D dhibcaha macaamiishaada.
Ururada B2C waa inay diirada saaraan xogta dadka, sida da'dooda, jinsigooda, daqligooda, shaqadooda, xaalada guurka, tirada caruurta, muuqaalada laba jibbaaran ee gurigooda, nambarka boostada, aqrinta liisaska, xubin ka noqoshada ururada iyo wixii la mid ah, iyo wixii la mid ah.
Ururada B2B waa inay diirada saaraan firmagraphicdata, oo ay kujiraan dakhliga shirkada, sanadaha ganacsiga, tirada shaqaalaha, u dhawaanshaha dhismooyinka kale, koodhka boostada, xaalada ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay, tirada xarumaha adeega iyo waxyaabaha lamidka ah.
Qaybta labaad ee dhibcaha 3D waa hawlgelinta
Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan doontaa inaad ogaato sida macaamilkani ugu hawlan yahay astaantaada? Ma waxay kugu arkeen oo keliya bandhigyada ganacsiga? Had iyo jeer taleefan kulama hadlaan? Miyay kaa raacayaan Twitter, Facebook iyo Instragram oo ka fiirinayaan FourSquare markay booqdaan goobtaada? Miyay ku biiraan mareegahaaga? Sida ay kula macaamilaan waxay saameyn ku yeelan kartaa xiriirkooda adiga. Isdhexgal badan oo shaqsiyadeed ayaa badanaa macnaheedu yahay xiriiro shaqsiyadeed oo badan.
Ta saddexaad, cadee halka uu macmiilkaagu ku sugan yahay xiriirka ay kula leeyihiin
Hadaadan horey ujoogin, waxaad ubaahantahay inaad uqeybiso keydka keydkaaga si waafaqsan waqtiga macaamiishaadu macaamilka kuu ahaa. Kani ma macaamil buu nolosha oo dhan soo iibsaday badeecad kasta oo aad haysato? Kani ma macmiil cusub oo aan ka warqabin dhammaan waxyaabaha shirkaddaadu bixiso? Sidaad qiyaasi karto, nooca iimaylka aad u dirto macmiilka cimrigaaga oo dhan aad buu uga duwan yahay midka aad qof u dirto horraantii xiriirkiisa ama xiriirkeeda.
In kasta oo suuqleyda badani ay u qaybiyaan xogtooda xog uruurinta dadweynaha ama firmagraphics oo keliya, waxay u baahan yihiin inay noqdaan u nugul heerka macmiilka ee nolosha oo aad ugu tiirsan tahay dhibcaha 3D. Macaamiil cusub oo weligiis uun e-mayl kuu soo diray ma noqon doono mid u xoog badan sida macaamilka muddada-dheer soo booqday xafiiskaaga. Sidoo kale, qofka aad kula kulantay bandhigga ganacsiga wuxuu noqon karaa macaamil ka itaal daran kan aamusnaanta kaa iibsaday shan sano. Ma ogaan doontid taas iyada oo aan 3D la dhalin.
sii kasta booqdaha daaweynta-gashiga cad-cad.
Iyada oo ay ku wada jiraan hadalkan ku saabsan adeegsiga dhibcaha hogaanka 3D si diiradda loo saaro booqdayaasha awoodda u leh inay wax iibsadaan, waan xumaan lahaa haddii aanan xusin in is-dhexgal kasta oo lala yeesho booqdeyaashu ay noqdaan waayo-aragnimo daaweyn cad-galoof - feejignaan, saaxiibtinimo iyo xalka -waxay kuxirantahay booqdaha martida. Xusuusnow, maahan in lacagta ugu badan laga sameeyo iibka ugu horeeya. Waxay ku saabsan tahay bixinta waxa booqdehu runtii u baahan yahay, taas oo ka dhalan doonta khibrad macmiil oo wanaagsan iyo iibinta mustaqbalka. Ku dheeree xushmaddaas booqde kasta, xitaa tartamayaasha, shaqo doonka, iyo ardayda jaamacadda. Marnaba ma ogaan doontid goorta naxariis yar ay bixin doonto faa iidooyinka hadhow.
Si fudud umaheli kartid macaamiil ugufiican. Waa inaad iyaga beertaa. Sidee? Iyaga oo awood u siinaya in ay si dhib la'aan ah ugu gudbaan marxalad kasta oo nolosha ah, helitaanka nuxurka saxda ah ama isku xirnaanta ay raadinayaan inta ay socdaan. Tani waa xoogga Xuquuqda Interactive ee Xalka Suuq-geynta Suuqa: awood u siinta ururada inay ogaadaan sida saxda ah halka rajada ama macaamilku ay ku jiraan xiriirkooda calaamadda - laga soo bilaabo rajada ilaa taageeraha xiisaha leh - iyo sida ugu wanaagsan ee loo wajaho si loo kordhiyo qiimaha nolosha.
Daah-: Xaqiiqda Isdhexgalka waa macmiil kiina ah oo kafaala qaada Martech Zone. Waxbadan ka baro xalka suuq geynta noloshooda maanta:
Baro wax badan oo ku saabsan Xaqa Isdhexgalka
Tags: 3d goolalb2bb2cTababarayaashaCustomernolosha macaamiishasuuq geynta nolosha macaamiishademographicsgaraafyadafirmographicsardayda shaqo doonka ahdhibcaha hogaankabooqdaha internetkasaxda ah is-dhexgalkadadka soo booqdabooqdayaasha webka
Troy Burk, agaasimaha guud iyo aasaasaha Xaqiiqda Isdhexgalka, waa hogaamiye feker la aqoonsan yahay oo ku hadla mowduucyada suuq geynta nolosha, suuq geynta otomaatiga, dhibcaha hogaanka iyo kobcinta, iyo iimaylka suuq geynta. Troy wuxuu ka qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda Ball State University. Wuxuu ku nool yahay Indianapolis xaaskiisa iyo seddex caruur ah halkaasoo uu uga adeegto Gudiga Suuqgeynta Xubinimada Rugta Ganacsiga ee Weyn Indianapolis wuxuuna ku lug leeyahay isboortiga dhalinyarada.
Laba barnaamij oo Twitter-ka ah oo Maareyn ah kuwa Raacaya